Ibhethri yokufaka esikhundleni ye-iPhone 5S ihambisana ne-16GB / 64GB China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > I-iPhone 5S Ibhethri > Ibhethri yokufaka esikhundleni ye-iPhone 5S ihambisana ne-16GB / 64GB
Umjikelezo omusha we-iPhone 5S 1560mAh esikhundleni sebhethri Pack
I-iPhone 5S 1560mAh 4.3V 5.45whr
Sisebenza umkhiqizo we-iPhone 5S ithrekhi yebhethri eyathatha indawo eyenziwa ngamaseli omjikelezo we-Brandnew zero kanye nebhodi lokuvikela, i-FPC (Flexible Printed Circuit). Ukuphila kwebhethri ngezikhathi ezingu-500-800, namanje kugcina u-80% amandla emva kwezikhathi ezingu-500. sisebenzisana ne-backsales yokulungisa ifoni esitolo, sibheka izesekeli zezingcingo zefoni bese sibheka esitolo sewebhu. Ibhethri yokufaka esikhundleni ye-iPhone 5S iyahambisana ne-16GB / 64GB, ifanele ikhodi ye-APN: 616-0718, 616-0720, 616-0721, 616-0722, 616-0728. Awukwazi ukufanelana ne-iPhone 5 noma i-iPhone 5C. Lena entsha ibhethri ye-iPhone, sicela ubuze isitolo se-professoional sokulungisa kusiza ukuhlangana. Amathuluzi angahlanganisiwe uma kunesidingo sicela uxhumane nathi.